Mari iyi ichashandiswa mukusimudzira mabasa ekuchengetedzwa pamwe nekuremekedzwa kwemitemo munyika, uye ichande iri muhomwe dzemasangano matatu akazvimirira.
Sangano reInternational Commission for Jurists richange rakabata homwe yemari ichashandiswa muzvirongwa zveJudicial Services Commission zvichasimbaradza kuremekedzwa kwemitemo pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzemunhu wese. Zvirongwa izvi zvichaitwa kwemakore matatu.
Sangano reLegal Resources Foundation richabata homwe yemari ichashandiswa nesangano reChief's Council mukusimudzira ruzivo rwematare emadzishe, masabhuku,emasadunhu, pamwe nekuwanisa ruzivo vose vane chekuita nematare echivanhu. Zvirongwa izvi zvichaitwa kwemwedzi makumi matatu.
Sangano remagweta munyika, reLaw Society of Zimbabwe richabata homwe yemari ichashandiswa mukusimudzirwa kwemashandiro emagweta munyaya dzesarudzo pamwe nenyaya dzinobata bumbiro remitemo yenyika.
Mukuru wezvirongwa musangano re Abameli Human Rights Lawyers Network, VaTineyi Mukwewa, vanoti kunyange hazvo vasingatarisiri kushanduka kwezvinhu kukuru munyaya dzezvekodzero dzevanhu munyika, mari iyi ichabatsira zvikuru mukuedza kuchengetedza kodzero dzevanhu munyika.
Hurukuro naVaTineyi Mukwewa